Kuyini ukugenca kokukhula? Nazi Izindlela Eziyi-15 | Martech Zone
Igama nokugenca imvamisa inegama elibi elihambisana nayo njengoba libhekisa ezinhlelweni. Kepha nabantu abagenca izinhlelo abahlali benza okuthile okungekho emthethweni noma okudala ukulimala. Ukugenca kwesinye isikhathi kuyindlela yokusebenza noma isinqamuleli. Ukufaka umcabango ofanayo ekukhangiseni kuyasebenza futhi. Yilokho ukuqhuma ukukhula.
Ukugenca ukukhula kwakusetshenziswa ekuqaleni zokuqala ababedinga ukwakha ukuqwashisa nokwamukelwa… kepha bengenaso isabelomali sokumaketha noma izinsiza zokukwenza. USean Ellis wabhala leli gama kubhulogi yakhe ngo-2010 kokuthunyelwe okubizwa ngokuthi Thola iHacker Hacker yokuqalisa kwakho lapho akhombe khona iHarry Grower njengenye indlela yokuqasha umakethi wendabuko, osebenza ngokugcwele.
Ukwehliswa kokukhula wake wabonwa njengokushintshwa kwecebo lokumaketha lendabuko, lesikhathi eside ngamasu esikhathi esifushane agxile ekusheshiseni ukukhula kanye nemali engenayo. Eminyakeni eyishumi edlule, noma kunjalo, izinzuzo zokugenca ukukhula ziye zabonwa yizo zonke izinkampani zosayizi futhi zamukelwa izinkampani ezijwayelekile kanye neziqalo ezincane.
Ukumaketha kwendabuko ku-inthanethi nokungaxhunyiwe ku-inthanethi kungashayela ukukhula okungakholeki kwezinkampani, futhi lawo macebo avame ukukhula kancane kancane kwenkampani ngokuhamba kwesikhathi. Kodwa-ke, kunezindlela zokuqaqa noma ukuqumba ukumaketha kwakho ngamasu angajwayelekile.
Ngenkathi ngingalithandi mathupha leli gama nokugenca, ibambekile njengegama elihambile (futhi elisetshenziswa kakhulu). Ngokubona kwami, amasu wokumaketha alinganiselayo kufanele asebenzise amasu wendabuko, wesikhathi eside namasu wokugenca ukukhula ngempumelelo.
Iyini Incazelo Yokugenca Kokukhula?
Ukugenca ukukhula kuyisu lokumaketha elisebenzisa izindlela zokudala nezingavumelani nokuthola ukuvezwa okuningi kumikhiqizo noma insizakalo yakho ngaphandle kokuchitha imali eningi. Leli gama lisetshenziselwe ukuqala kwezobuchwepheshe okungenaso isabelomali sokumaketha, kepha bengasebenzisa ngobuhlakani izinjini zosesho, ukumaketha kwezenhlalo, analytics, nokuhlolela ukwandisa ngokushesha nokukhulisa ukutholakala kwabo ku-inthanethi.
Izindlela Zokuqola Zokukhula Namasu
I-Eliv8 ithuthukise le infographic enhle ngokuqoqwa Kwamasu & Imibono yabo eyi-15 Engcono Yokukhula Nokukhula:
Thepha kuzithameli zangaphandle - Ukubhuloga kwezivakashi kuyakhulunywa, kepha i-podcasting iyindlela enhle yokungena kwezinye izethameli. Sivame ukumema abagqugquzeli embonini yethu kwi-podcast yethu ukuze banakwe yizithameli zabo.
Sebenzisa Amapulatifomu Eqembu Lesithathu - Lona umqondo omuhle. Sinohlu olukhulu lwe- amasayithi aku-inthanethi okuphendula noma ukukhuthaza imikhiqizo yakho lapha.
Khomba Abalandeli Bakho Osincintisana Nabo - Womabili amathuluzi omphakathi akhokhelwayo nawaphilayo akhona abalandeli bezimbangi zakho. Uma ungabasiza, kungani ungaxhumani nabo? Uma ukwazi ukwehlula oncintisana nabo futhi usize amakhasimende abo… bangavele baqonde phambili.
Dala Okuqukethwe Kwakho Uhambo Lomthengi - Phendula imibuzo abathengi abacwaninga online.
Dala Okuqukethwe Okucacile Kwekhasi - Sisebenzisa izikhangiso eziguqukayo eziqondiswe ngaphandle kwesigaba se-athikili, zinikeze ukubizelwa esenzweni okufanele abafundi.
Yakha Uhlu Oluhlosiwe Lwama-imeyili - Hlukanisa amakhasimende akho kumathemba akho futhi uwafundise ngemikhiqizo nezinsizakalo zakho.
Yenza kube ngokwakho okwenziwayo - Yini ongayengeza emakhasini akho enziwe ngezifiso esivakashini noma ahlukaniswe nabo? Ingabe sebevele beyikhasimende? Bayabuya? Ingabe bachofoza kusixhumanisi sokudlulisela? Uma ukwazi ukuhlela isipiliyoni ngokuya ngokuthi bangobani, ungaqhuba umsebenzi wokuguqula ongcono.
Izaziso Zokulahlwa Kwenqola - Leli iqhinga elikhulu nje okumele wonke amapulatifomu e-ecommerce abe nalo. Kuyithuba lokulandela othile ukuze aguqule ngokuqukethwe okwengeziwe ezungeze okwenziwayo noma okunikezwayo.
Imincintiswano Yokusingathwa - Sethula imincintiswano ethile kungekudala I-Hellowave, ipulatifomu eqinile enemincintiswano efakazelwe, enesifanekiso egijima kusayithi lakho nakwizingosi zenhlalo.
Yakha umphakathi okhethekile - Lona kuthatha umsebenzi, kodwa uma ungakwazi guqula izithameli zakho zibe umphakathi, unabasebenzi abangcono kakhulu bokuthuthukisa ibhizinisi abangathengwa imali. I-PS: Lokhu kunzima impela, noma kunjalo!
Ukukhulisa Kuholela Ngokuzenzakalelayo - Kade sisebenzisa ukunakekelwa nokuzenzekelayo kwamakhasimende ethu kusetshenziswa Isifiso - isixazululo esingabizi ngendlela emangalisayo - nokuthola imiphumela emangalisayo.
Ukwabelana ngomvuzo nokudluliselwa - Abantu banamathuba amaningi okuthi benze okuthile uma umngane ebatshela. Uma unepulatifomu namuhla, kufanele ube nohlelo lokushumeka olushumekiwe nalo.
Izikhangiso eziphinda zibuze - Buyisa izivakashi kuwebhusayithi yakho nezikhangiso ezizilandelayo. Ukuhlela kabusha kungakhuphula ukuseshwa komkhiqizo kuze kufike ku-1,000% nokuvakashelwa ngo-720% ngemuva kwamaviki ama-4.
Sebenzisa Idatha Yakho - Amabhizinisi angama-50% akuthola kunzima ukuthi ukumaketha kube yimiphumela yemali engenayo. Kusetshenziswa idatha futhi analytics izothuthukisa i-ROI yakho.
Yenza Izinto Ezingasikali - Qhubeka nokuxoxa ngamathuba futhi usebenze kanzima ukukhomba amanye amasu wokukhula okukhulayo.
Ngizofaka eyami intandokazi inqubo yokugenca lapha…
Ukusebenzisa Semrush, Ngikhomba amakhasi indawo yami engaphansi kwayo phakathi kwendawo yesi-2 neye-10, ngibheka amakhasi alo mncintiswano, ngibhala kabusha futhi ngithuthukise ikhasi ngolwazi oluthe xaxa, ihluzo ezingcono, izibalo ezithile… bese ngilishicilele kabusha njengelisha. Lapho ngenza umsebenzi omuhle walokho futhi ngivuselela ikhasi, ngivame ukulibona lithola ukubonakala okwengeziwe nezikhundla eziphakeme njengoba abantu behlanganyela futhi bebhekisa kulo.
Izisetshenziswa Zokugenca Zokukhula
Kunezinsizakusebenza ezingeziwe ku-inthanethi, kufaka phakathi I-Eliv8, Reddit, GrowthHackers, Kanye Umhlahlandlela Wokugenca Ukukhula.
Tags: ukukhuthazaukulahlwa kwenqolaimincintiswanoIdathaukuhlukaniswa kwe-imeyiliukuqhuma ukukhulaimibono yokugenca ukukhulaamasu wokugenca ukukhulaukubhalisa kwabavakashiukhozi_fmukuzenzelaukudluliselwai-retargetingumvuzoukuqondiswa kwezinkundla zokuxhumanauhlu lwama-imeyili ahlosiweizinhlu ezihlosiweubufakazikuyini ukugenca ukukhula
Sep 29, 2016 ku-3: 11 AM
Ngifunde i-athikili yakho, lokhu okuthunyelwe kuyathakazelisa kakhulu ngokugenca ukukhula. ngilandele konke njengoba usho ku-athikili yakho. zonke lezi zibonelo zilungele ukwebiwa kokukhula. Ngiyabonga